समाचार - डिस्पोजल व्यक्तिगत मास्क
कसरी डिस्पोजेबल छनौट गर्ने व्यक्तिगत मुकुट?
चिकित्सा मास्कहरूको लागि, अधिक संवेदनशील नागरिकहरूले डिस्पोजेबल लगाउनको लागि छनौट गर्न सक्दछन्। यो ध्यान दिनुपर्दछ कि बाँझीकरण स्तर र मेडिकल नर्सि mas मास्कको बाहिरी प्याकेजिंगमा अंकित सामान्य स्तरले मास्कको सफाईलाई नै जनाउँछ, जसलाई फिल्टरि with प्रभावको साथ केही गर्नुपर्दैन।
सक्रिय कार्बन मास्क मास्कमा सक्रिय कार्बनद्वारा फिल्टर गरिन्छ, र सक्रिय कार्बन धेरै पटक बेकार हुन्छ, त्यसैले यसलाई प्रत्येक दिन प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ।
N95 र N90 एक सुरक्षा मानक हो। "N" को अर्थ यो तेल कण पदार्थको लागि उपयुक्त छैन; "″ ″ ″ को मतलब भनेको मानकमा तोकिएको अवस्थामा पत्ता लगाउने सर्तहरू अन्तर्गत ०. mic माइक्रोनको कण आकार भएको कणहरू फिल्टर गर्ने क्षमता 95%% सम्म पुग्छ।
के KN95 मास्क लगाएमा भाइरस संक्रमणको जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छ?
KN95 मास्क सही रूपमा लगाउँदा संक्रमणको जोखिमलाई धेरै कम गर्न सक्दछ, तर यसको मतलब यो होइन कि मास्क लगाउँदा संक्रमणको जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छ।
यो महामारीको स्थितिमा राज्यले तोकेको रोकथाम र अलगाव आवश्यकताहरूको कडाईका साथ पालन गर्न सिफारिस गरिन्छ। मास्कहरू ठीकसँग लगाउनुहोस् र हात र आँखा स्वच्छ राख्नुहोस्।
के मल्टिपल मास्क लगाउँदा भाइरस सरुवाबाट सुरक्षित हुन सक्छ?
होइन यो सही रूपमा लगाउनुहोस् एक स्नुग फिट र राम्रो एयरटिगेटीपन सुनिश्चित गर्न। केवल N95 र KN95 मास्कले इच्छित सुरक्षा प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ। बहु स्ट्याकिंग मात्र न्यून फिट हुन सक्छ, तर सास प्रतिरोध र असुविधा पनि वृद्धि गर्दछ।
अमेरिका काममा फर्कंदा हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्नु भन्दा अझ बढी गर्न आवश्यक छ। हामीले एक अर्कालाई सुरक्षित राख्नु पर्छ। किन यति धेरै व्यक्तिहरूले फेस मास्क लगाएका छन् ... त्यसैले यदि तिनीहरू संक्रमित भएमा तिनीहरूले अन्य व्यक्तिहरूमा भाइरसहरू फैलाउँदैनन्। यसको मतलब यो हो कि, यदि तपाइँ आफैं र तपाइँका सहकर्मीहरूलाई सुरक्षित राख्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले ती ग्राहकहरू, तपाइँका विक्रेताहरू, उनीहरूसँग जो बस वा ट्रेन साझा गर्छन्, र उनीहरूसँग भेट्ने कसैलाई पनि ती अनुहार मास्कहरू पठाउनु पर्छ। दिन भाग्यवस, हामीसँग अनुहार मास्कहरू छन् जसले महान सुरक्षा मात्र प्रदान गर्दैन, तर यसलाई सजिलै ठूलो स easily्ख्यामा पनि अर्डर गर्न सकिन्छ।
गुणवत्ता लोगो उत्पादन सुविधाहरूबाट डिस्पोजेबल व्यक्तिगत सुरक्षा फेस मास्क:
धूलो, ब्याक्टेरिया, बूँदाहरू, र वायु प्रदूषणबाट सुरक्षाका3तहहरू
सहज, छाला मैत्री बनावट
लोचदार ईयरलूपहरू यसलाई राख्न वा हटाउन सजिलो बनाउँदछ
समायोज्य नाक पुल पट्टी
bac%% भन्दा बढीको ब्याक्टेरिया फिल्टर प्रक्रिया
डिस्पोजेबल व्यक्तिगत सुरक्षा फेस मास्कले कुनै पनि संगठन वा व्यवसायको लागि उत्कृष्ट सहयोगी बनाउँदछ किनकि हामी सबै एक अर्कालाई सुरक्षित राख्न कोशिस गर्दैछौं। आज तपाईंको अर्डर गर्नुहोस्।
मिलकोस्ट--प्लाई लेयर डिस्पोजेबल फेस मास्कहरू टिकाऊ, उच्च गुणस्तर, र वास्तविक कच्चा मालको साथ निर्मित हुन्छन्। हाम्रो मास्क सामान्य प्रयोगको लागि हो र सार्वजनिकमा बाहिर जान, कार्यालयमा, किनमेल, भोजन, काम, यात्रा, र समग्र सामान्य सुरक्षाका लागि उपयुक्त छन्।
सासनीय--प्लाई तहहरू सहित बनाइएको: पहिलो तह गैर बुनेका कपडा, दोस्रो तह पिघलिएको-उड़ाएको कपडा, तेस्रो तह गैर बुनेका कपडा। प्रत्येक मास्क लगाउन सजिलो छ र टिकाऊ र लचिलो लोचदार ब्यान्डको साथ बन्द। मास्कको फोल्डि cont कन्टूर डिजाइन अनुहारलाई बढी आरामसँग फिट गर्दछ। मास्कको प्रयोग गरिसकेपछि, केवल मास्क हटाउनुहोस् र यसलाई फ्याक गर्नुहोस्।
हाम्रो अनुहार मास्क राज्य मास्क आवश्यकता जनादेशको पालना गर्दछ र हवाई यात्रा, एयरपोर्ट, कारपुल, सवारी-साझेदारी, कार यात्रा, बस र ट्रेन सवारी, र सामान्य यात्रा को लागी महान हो।
COVID-19 कोरोनाभाइरसको प्रसार लाई रोक्न मद्दतको लागि, कृपया सार्वजनिक रूपमा बाहिर हुँदा अनुहारको मास्क लगाउनुहोस् र सामाजिक दूरीको अभ्यास गर्नुहोस्।
रंग: हल्का निलो
आकार: १.5..5 सेमी x .5 ..5 सेमी
सामग्री: p प्लाई गैर बुनेका कपडा र पग्लियो-उडाइएको कपडा
नोट: चिकित्सा प्रयोगको लागि लक्षित छैन। रोगको प्रसारण घटाउन प्रमाणित भएको छैन।